Iswitshi eshukumayo eshukumayo eshukumayo eshukumayo isixhobo sokutshintsha, abavelisi, ababoneleli, ifektri - NANTONG RONGHENG ZOBUME BENDALO KWI-CO., LTD.
Ikhaya>iimveliso>Inkqubo yoLawulo oluzenzekelayo>Isendlini yensimbi yangaphakathi eshenxiswayo
1 Ulinganiswe umbane kV 24
2 Inqanaba lokuvala 1min amandla ombane ukumelana ombane kV 65 （79）
Umbane onamandla okunyamezela umbane kV 125 （145）
3 Ikaliwe rhoqo Hz 50
4 Ibhasi ephambili ikalwe ngoku A Ngo-630, 1250, 1600 2000, 2500 Ngo-2500, 3150, 4000
5 Ikaliwe ixesha elifutshane ukumelana ngoku kA Ngo-16, 20, 25 25, 31.5 Ngo-31.5, 40, 50
6 Ikaliwe incopho ukumelana yangoku kA Ngo-40, 50, 63 63, 80 Ngo-80, 100, 125
7 Umgama wokuhamba mm / kV 20
8 Nqanaba lo Khuselo
IP4X (IP2X emva kokuba ucango lwekhabhathi luvuliwe)
9 ubunzima kg 900
● Umzimba wekhabhinethi uhlanganiswe ngokugoba okuninzi kwepleyiti yealuminium-zinc, ethintela impazamo ebangelwe kukuwelda, kunye nokulungiswa kwendibano yomzimba wekhabhinethi kuphezulu.
● Sebenzisa ubume obonyuswe phakathi, uzinzo ngoomatshini kunye nokutshintshiselana okuhle.
● Sebenzisa i-D-type okanye i-O-type busbars, kunye ne-epoxy resin vulcanization process, ukufezekisa ukufakwa kwe-inshurensi ngokupheleleyo, ukuphucula ukuhanjiswa kwentsimi yombane kwikhabhinethi, kunye nokuphucula inqanaba lokugquma jikelele le-switchgear.
● Esi sixhobo sixhotyiswe ngemisebenzi eyahlukeneyo yokuthintela: njengokungena kombane kunye nokuphuma kwetroli yesekethe, ukuvulwa kombane kunye nokusebenza kokuvala kweswitshi somhlaba, njl.njl. impazamo.
● Umsebenzi wokungena nokuphuma kwetroli yesekethe, ukuvula nokusebenza kokuvala iswitshi somhlaba, kunye nomsebenzi wokuvula nokuvala wesaphuli wesekethe konke kunokuqhutywa ngombane. Kwaye i-PLC isetyenziselwa ukulinganisa kunye nokulawula ukusebenza kwe-on-off operation ukuze iqonde ukusebenza okwenziweyo. Sebenzisa isikrini sokuchukumisa njengomboniso womatshini womntu, kwaye usebenze iindawo ezihambelanayo kumzobo wokulinganisa onikezwe siscreen.
Qaphela: Nantoni na engaphaya kwenqanaba lezi mfuno zingasentla iya kumiselwa ngumsebenzisi ngokubonisana nomenzi wayo. Kwiindawo ezizodwa, ezinje ngezitishi ezingaphantsi komhlaba, izitishi ezingalindelwanga kunye nezinye iimeko zokusebenza ezingekho mgangathweni, izixhobo zokupholisa ubushushu rhoqo kufuneka zongezwe ngaphakathi ukuphucula imeko yokusebenza kwemveliso kunye nokuqinisekisa ukusebenza okukhuselekileyo nokuthembekileyo kwezixhobo.